Wararka Suuqa Caawa: Chelsea oo dib u soo Ceshaneysa Hazard, Sheekada Amad Diallo iyo Qodobo kale | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Wararka Suuqa Caawa: Chelsea oo dib u soo Ceshaneysa Hazard, Sheekada Amad...
Wararka Suuqa Caawa: Chelsea oo dib u soo Ceshaneysa Hazard, Sheekada Amad Diallo iyo Qodobo kale
Kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in ay isku diyaarinayso in ayheshiis cusub oo shan sano ahu soo bandhigto xiddiga khadka dhexe ee Gavi . Sida laga soo xigtay saxafiga reer Talyaani Fabrizio Romano
Daafaca Chelsea Antonio Rudiger ayaa lagu soo waramayaa inuu miisaamayo dooqyadiisa ka hor inta uusan qaadan go’aanka ugu dambeeya ee mustaqbalkiisa fog. Sida laga soo xigtay Sky Sports News
kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay xooga saareyso saxiixa xidiga Manchester City ee Raheem Sterling iyagoo heshiiska qeyb uga dhigaya Ousmane Dembele . Sida laga soo xigtay wargeyska Isbaanishka Sport
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay wadahadalo joogto ah kula jirto Bruno Fernandes iyo wakiiladiisa si heshiis cusub loogu saxiixo Old Trafford. Sida laga soo xigtay saxafiga reer Talyaani Fabrizio Romano
Xiddiga qadka dhexe ee kooxda Paris Saint-Germain Marco Verratti ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay ammaanta uu ka helaymaamulaha Manchester City Pep Guardiola . France Info .
Tottenham Hotspur ayaa lagu soo waramayaa inay ka fikireyso inay dalab laba jeer ah ka gudbiso labada ciyaaryahanee Juventus Weston McKennie iyo Dejan Kulusevski . Sida laga soo xigtay Calciomercato.
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay ku adkeysan doonto inay isku daydo iibinta Samuel Umtiti iyo Clement Lenglet inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga bisha Janaayo. Sida laga soo xigtay Lesportiudecatalunya.cat
Xiddiga garabka uga ciyaara Manchester United Amad Diallo ayaa lagu soo waramayaa inuu weli bartilmaameed u yahay Feyenoord . Sida laga soo xigtay Feyenoord.
Milkiilaha Chelsea Roman Abramovich ayaa lagu soo waramayaa inuu ku rajo weyn yahay inuu dib ula soo saxiixdo garabka Real Madrid Eden Hazard . Sida laga soo xigtay El Nacional
Previous articleDaawo: Guddoomiyaha Kaaraan oo weerar ku qaaday Saney Cabdulle iyo beesha…
Next articleArsène Wenger oo dib ugu soo laabanaya Masraxyada Kubada Caalamka
Xog: Dhowr Arrimood oo dib u dhigay weerarkii uu Qoor Qoor...